विवाह गरेर सुहागरात नमनाउने नपुसंक नै हो | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » विवाह गरेर सुहागरात नमनाउने नपुसंक नै हो
विवाह गरेर सुहागरात नमनाउने नपुसंक नै हो
saharatimes Monday, August 1, 20160No comments
पार्टी तथा पार्टी बाहिर जहिले पनि फरकधारको नेतृत्व गर्ने गोविन्द चौधरी त्यही कारणले होला जहिले अलगथलग देखिनु हुन्छ । नेपाल सद्भावना पार्टीबाट अलग भएर तमलोपा गठन गर्नुभएका गोविन्द चौधरी सो पार्टीका महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । नवलपरासीमा भएको पहिलो महाधिवेशनमा अध्यक्ष उम्मेदवारी दिन भनिएपनि चर्चामा आएका गोविन्द चौधरी पार्टीको रिकन्ट्रशन गर्न आवश्यक रहेको बताउँनु हुन्छ । सरकारमा मधेशी दलको सहभागि लागयतका विषयमा सहाराटाइम्सका प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको मुख्य अंशः
अहिलेको सत्ता समिकरणमा मधेशवादी दलको निकै चर्चा रहेको छ, यो सत्ता गठबन्धनमा मधेशवादी दल जान्छ कि जाँदैन के लाग्छ तपाईलाई ?
–अहिले सत्ता समिकरणमा चाहँदा नचाहदैन मधेशवादी दल सहभागि भएको छ । सत्तामा जानु वा नैतिक समर्थन गर्नु एउटै कुरा हो मेरो विचारमा । जुन जनता चेतनशिल छैन त्यसको लागि मात्र यो दृष्टिभ्रमा हुनसक्छ कि हामी सत्तामा जाँदैनौ तर सत्ता निर्माणका लागि सहयोग गर्छौ । चेतशिल जनता वा व्यक्तिका लागि नैतिक समर्थन र सत्तामा सहभागि भने कुरा एउटै हो । अधिकाँश मधेशवादी दलको कुरा आइसकेको छ कि सत्तामा नजाने कुरा गरिरहेका छन् तर घुमाउरोपारामा सत्ता चाहिन्छ अभास दिइरहेका हुन्छन् । इमान्दारिक पूर्वक अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् भने नैतिक समर्थन वा सरकारमा जाने कुरा नै गर्नु हुँदैन । यदि सरकार फेर्ने खेलमा लागिएकै हो भने माछा मार्ने तर माछा नखाने जस्तो हुन जान्छ, जब कि यो कुरा मेल खाँदैन । यो दुईधारे नीति अर्थात डबल रोलले अब काम चल्दैन, यसमा स्पष्ट भएर आउनुपर्छ ।
जुन प्रकारको एक्सरसाइजहरु भइरहेका छन्, त्यसले गर्दा उनीहरु सरकारमा जान्छ कि जाँदैन कस्तो लाग् छ ?
–यिनीहरु सत्तामा गयो भने सत्ताको राजनीतिक गर्या भन्दै जनता निराश हुन्छ । बुद्धिजिवीहरुबाट पनि आलोचना आउँछन् । मधेशवादी दललाई यिनै कुराको डर छ अरु केही छैन । अर्को कुरा अहिलेको जुन समिकरण छ त्यो समिकरण मधेशको मुद्दाप्रति कति गम्भीर छ मधेशको मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्छ त्यसमा पनि भर पर्छ किनभने काँग्रेस र एमालेमा कुनै फरक छैन । मधेश आन्दोलनको पुरै एक्टीभिटिज हेर्नु भयो भने चाहे त्यो ०६३÷०६४ को आन्दोलन होस् या अहिलेको मधेश आन्दोलन होस् नेपाली काँग्रेसकै नेतृत्वमा मधेशी जनताले सहादत दिएका हुन् । यसरी विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने एमालेभन्दा काँग्रेसको अनुहार .खराब छ । ल ठिक छ एमालेले देशका लागि संघीयता ठिक होइन भनिरहेका छन् रे, त्यति त भन्न आँट गरेछ नि । आफ्नो कित्ता स्पष्ट गरेका छन् नि तर काँग्रेस जस्तो दुई जिब्रो त छैन नि । काँग्रेसले यो पनि ठिक त्यो पनि ठिक, गणतन्त्र पनि ठिक र बेबी किगं पनि ठिक । यो कस्तो नीति, यो कस्तो पार्टी । एमाले आफ्नो कुरा स्पष्ट छ । होला, त्यो पार्टीले राखेको धारणामा देशको चित्त नबुझेको हुनुपर्छ । देशलाई हानी गर्न सक्छ र त्यो बेग्लै कुरा हो । कमसे कम जनतालाई भ्रममा त राखेका छैन । तर काँग्रेस जहिले पनि भ्रमा राख्ने काम गरेको छ ।
काँग्रेस र माओवादीलाई समर्थन गरिसकेपछि सरकारमा जानैपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
–विवाह गरिसकेपछि सुहागरात मनाएन भने दुनियाँको नजरमा नपुसंकै देखिन्छ । सरकार ढाल्न सहयोग गरिसकेका छ, सरकार बनाउन पनि लगभग समर्थन गरिसकेको छ भने सरकारमा जान किन डराएको हो मैले कुरा बुझ्न सकिरहेका छैन । हो, सरकारमा जानु अघि के के लिन सकिन्छ, के के कमिन्टमेन्ट गराउन सकिन्छ ती सबै गराई हाल्नु पर्छ तर सरकारमा जानुपर्छ । यदि सरकारमा जानु नै थिएन भने सत्ताको खेलमा किन लाग्यो । ओली सरकार ढाल्न किन सहयोग गर्यो, यो चाहि गलत हो ।
भरपर्दो प्रतिवद्धता आए हामी सरकार निर्माणमा सहयोग गर्छौ भनि रहेका छ, के त्यो भरपर्दो भनेको ?
–यो भरपर्दो भन्नु एउटा बहाना हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइरालाको पालामा भएको आठ बुँदे सम्झौता भन्दा अर्को कुनै पनि सहमति र प्रतिवद्धता भरपर्दो छैन । आठ बुँदे सम्झौता भएपछि पनि हामी बीच बीचमा सरकारमा गएकै हौं । अन्तरिम सविधान संशोधन पनि भएकै हो । सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा लागेकै हो । तर कुनै पूरा भएन । अब अहिले आएर फेरि अर्को प्रतिवद्धता पूरा होला भनि कसरी भन्ने ? त्यसैले आठ बुँदे प्रतिवद्धता जस्तो अर्को प्रतिवद्धता वा सहमति नकहिले हुन्छ नहुन दिन्छ । यो देशका सबै ठूला दल एउटै नश्लको हो त्यसले हामी नश्लवादी भन्छौ । एउटै नश्लको भएपछि आफ्नै नश्ल विपरित कसरी जान्छ ? जसरी हामी आफ्नो समुदाय, वर्ग, क्षेत्रका लागि लडिरहेका छौ भने उनीहरु पनि आफ्नो वर्ग, सुमदाय र क्षेत्रका लागि लड्छन् यो कुन ठूलो कुरा हो । यसमा आश्चर्य मान्ने कुरै छैन । नश्लवादी चिन्तन तोड्नका लागि समाजिक गुरुत्वको आवश्यकता छ । यो भयो भने समाजमा केही गर्ने आँट आउँछ । मेरो विचारमा देश सविधानले चल्दैन, समाजिक गुरुत्वले चल्छ । बेलायतमा कुन सधिवान छ जो देश चलिरहेका छन् । विना सविधान पनि देशहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । जसले समाजिक गुरुत्वलाई बुझेका छन् त्यसबाट राम्रोसँग देश चलेका छन् । जो ठग छन्, जो फ्रड छ त्यहाँ जस्तोसुकै सविधान बनाए पनि केही हुनेबाला छैन त्यहाँ अंक गणितको राजनीतिक हुन्छ । कोही दौरा सुरुवाल फेटो समातेर राष्ट्रवादी त कोही धोती गमछा समातेर राष्ट्रवादी । यहाँ राष्ट्र«वादी कोही छैन ।
तपाई सरकारमा जाने कुरा गर्नुहुन्छ, यही कुरा भोली सार्वजनिक भयो भने जनता आग बबुला हुन्छ, कुनै नेता सरकारको कुरा गर्यो भने नानाथरी कमेन्टसहरु आउन थाल्छन् अनि कसरी सरकारमा जाने सम्भव हुन्छ ?
–यो समस्या त हामीले आफैले उब्जाएका हौ नि । आफूलाई आन्दोलनकारी, त्यागी, तपस्वी भने तर सरकार ढाल्ने र बनाउनेमा सहभागि हुने भएपछि जनताले कसरी विश्वास गर्छ । त्यागी भनिसकेपछि भोगी कसरी बन्ने त्यहाँ त नैतिक संकट उत्पन्न हुन्छ । कोही पनि साधु हुनका लागि राजनीतिक गर्दैन । राजनीतिकको एकमात्र उद्देश्य हो सत्ता प्राप्ति र त्यो सत्ताबाट जनतालाई सेवा । हरेक देशको सत्तालाई त्यो देशको प्रभु सत्तालाई परिभाषित गर्दछ । प्रभुसत्तालाई कसरी परिभाषित गर्ने त्यो आँट हुनुपर्यो यो त्यागी र भोगी भनेर हुँदैन ।
तपाईको यी कुराहरु सुन्दा त राजनीतिकमा झन उल्झनहरु बढ्दै गइरहेका छन्, होइन ?
–हो, झन उल्झनमा फँस्दै गइरहेको छ । निराशा बढ्छ । निराश भएको मान्छेले दुईटा काम गर्छ । आत्महत्या गर्छ वा हत्या गर्छ । तर राजनीतिकमा आत्महत्या हुँदैन, हत्या मात्र हुन्छ । यो देशमा जति निराशा बढ्दै जान्छ, त्यति नै समस्या बल्झिदैजान्छ ।
त्यसो भए समस्या कसरी समाधान हुन्छ त ?
–त्यसको एउटै उपाय हो समाजिक गरुत्व तयार गर्ने । समाजिक गुरुत्व तयार भएन भने जजस्तो आन्दोलन गरेपनि केही प्राप्त हुँदैन । मधेशकै कुरा गरौ त । मधेशकै आन्दोलनमा सबै इमान्दारी पूर्वक लागेका छन् त, आन्दोलनलाई सफतापूर्वक सम्पन्न गर्न कोही पनि हार्दिकतापूर्वक लागेका छन् त । कोही पनि लागेका छैन ।
यो मधेश आन्दोलन, रिले अनसनलगायतका कुराले पनि समाजिक गुरुत्व प्राप्त हुन्छ नि त ?
–हो, समाजिक गुरुत्व जन्माउने एउटा पार्ट हो । तर, त्यो दिशामा काम भएकै छैन । अहिलसम्म कुनै दिशा लिएको छैन । स्पष्ट भएर आउनु पर्यो । संघीयता पक्षधर नै स्पष्ट छैन मेरो विचारमा । राष्ट्रियताको अधारमा, राष्ट्रिय आन्दोलनको आधारमा कुनै पनि नेता स्पष्ट देखिएको छैन । विहारी, पञ्जावी, मधेशी, राष्ट्रियता हो तर आदिवासी जनजाति राष्ट्रियता होइन । यो समाजिक पहिचान हो । यिनिहरुलाई गोर्खाली समुदायको रुमपा चिन्छ । राष्ट्रिय राज्य लिनका लागि पहिला आफ्नो राष्ट्रियता स्पष्ट गर्नुपर्यो । यो स्पष्ट गरेर गएन भने आन्दोलन कन्फ्युज हुन्छ । र, त्यही कारणले हाम्रो आन्दोलन कन्फ्युजमा छ । नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने नेपालसँग जोडिएर आएको भुगोल नेपाल हो । यसली नेपाल भनेको उपत्यका मात्र हो । यहाँ नेवार मात्र होइन किनभने आफ्नो विक्रम सम्वत छ, आफ्नै कलासँस्कृति र भाषा छ । मगर, गुरुगं, राई, लिम्बु, मधेशीलगायत सबै प्राविधिक हुन् । हिजो ओली सत्तामा थिए, भोली दहाल आउँला, पर्सी कुने पौडेल आउला । यिनीहरुलाई एउटा भ्रम हुन्छ कि दौरा सरुवाल लगायो नेपाली भयो । खस भन्नाले बाहुन, ठकुरी, दशनामीलाई भन्छ भने कुरा सविधानमा मधेश आन्दोलनकै बलमा लेख्यो । पहिचानको आन्दोलनको बलमा लेख्यो ।
मुख्य रुपमा मधेशमा २०६३ देखि अधिकारको लडाई शुरु भएको हो, के त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म मधेशी जनताले केही पाएको छैन त ?
–मधेश एउटै कुरा पाएको छ त्यो हो कन्ससनेस (चेतना) । बजेटको हकमा हेर्ने भने मधेशका लागि जुन बजेट पंचायतकालमा थियो, त्यो बहुदलमा पनि आयो र अहिल गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा त्यस्तै बजेट छ भने मधेशले के पायो के पाएन आफै बुझ्न सकिन्छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । अधिकारको हकमा केही पाएन तर राजनीतिक चेतना अवश्य पाएको छ, त्यो पनि प्रयाप्त छैन । चेतना बढाउने तिर लाग्नुपर्छ । अर्को कुरा सत्तासिन मनोविज्ञानलाई हल्लाएको छ तर ढाल्न सकेका छैन ।
अन्त्य, तपाईको पार्टीको महाधिवेशन सकिएको एकमहिना भन्दा बढी भइसक्यो, पदाधिकारीदेखि अन्य पदमा मनोनित तथा चयन गर्ने काम अझै भएको छैन किन ?
–महाधिवेशनमा पुरानै नेतृत्वलाई सर्वसम्मति राख्ने हिसाबले कुरा अगाडि बढेको छ । पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरु चयन गर्न बाँकी छ जुन अध्यक्ष (महन्थ ठाकुर) जीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । मिलाउने काम गरिराख्नु भएको होला । एक दुईजना लाई मिलाउने काम होइन । धेरै पदहरुमा मिलाउने देखिन्छ त्यसैले अलि टाइमल लागेको होला अरु केही होइन । हामीले यति अपेक्षा गरेका छौ कि पार्टीलाई दीर्घजिवी बनाउनु पर्यो ।
तपाई पनि अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो किन फिर्ता लिनुभयो त ?
–पार्टी जन्मेको नौ वर्ष भयो तर गतिमान भएन । पार्टीको नेता बन्यो तर पार्टी बनेन । पार्टीलाई गतिमान मनाउन अध्यक्षमा भिड्ने तयारी गरेका थिए । यद्यपी विभिन्न पार्टीका नेताहरु एक ठाउँ आएर नयाँ शक्ति बनाउने भनि यो पार्टी खोलिएको हो । पार्टीलाई गतिमान बनाउन समय नपुगेको हो कि भने लागेर नै नेतृत्वलाई समय दिएको हुँ ।